axle ai Inotanga MbeInvest Funding Campaign - NAB Ratidza Nhau ne Broadcast Beat. Mutasviki wezveNhepfenyuro weNAB Ratidza, Mugadziri weNAB Ratidza LIVE
musha » Featured » axle ai Rinotanga MbeInvest Funding Campaign
Boston based axle ai iri munhau zvakare. Iyo kambani yekupayona, ichienderera mberi kugadzirisa zvinonyanya kudiwa zvinodiwa zvekutsvaga mavhidhiyo ekutsvakurudza uye zvishandiso zvekushandisa zviduku kusvika kumazana emasikirwo emakwikwi, yakaparurwa muvhiki yapfuura, kutangwa kwesimbe ai GearTM, inobatanidzwa inobatanidza mutsva we Apple Mac mini masikirwo emagetsi ane axle ai's browser-based, AI-inobudisa mutevedzeri wehupfumi, kushandiswa kwemabasa uye transcode software. axle ai Gear inosanganisira state-of-the-art auto-tagging uye tsvakurudza nemashandisirwo emagetsi ekufambisa uye zvishandiso zvekutengesa zvakagadzirirwa kushandiswa kwekushandiswa uye kushandiswa kwakakwana.
Nhasi, kambani yakaratidza kuti iri kutanga hupfumi hwemari MbeInInvest, inotungamirira boka revanhu vakawanda. Nzvimbo iyi inorarama nhasi www.seedinvest.com/axle.ai/seed. MbeInInvest inopa vashandi vega wega mari yekusvikidzwa kwekutanga kutengesa matanho ekutsvaga kwekutsvaga. MbeInvest yakabhadharwa pamusoro peCNUMX startups uye ine urongwa hunokura huri nani hwevarimi ve 150. MbeInInvest yave iine huwandu hwekutanga kwe200,000 inoshandiswa kuwedzera mari kubvira pakatanga uye yakagamuchira 25,000% yekambani iyo kuti iiswe pachikuva.
Somugumisiro wekufamba kweJOBS (Jumpstart Yedu Bhizimusi Kutanga) Mutemo mu 2012, vese vanobvumirwa uye vasina vimbisi vanobvumirwa vanokwanisa kuisa mumakambani ega. SeedInvest inoita kuti izvi zvigoneke mukuita uye kambani, iyo yave iri mukukura kwechimwe nguva kwekugamuchira kugadzirwa kwekunze kunze kwepuratifomu.
axle ai akatengesa mavhidhiyo ekutsvaga nekutsvaga mazano ehurongwa kune mamwe mazana emakambani e500 munyika yose, kubva kune vhidhiyo yemitambo yakadai seT Turner, CBS neParamount, kumakambani akawanda eRei, Reebok, Coca-Cola uye Price Waterhouse Coopers. Iyo software, iyo inoshandiswa mberi nekufambira mberi kwekuchenjera kwekuvaka uye yekudzidza kwemichina, inobvumira vatengi kugadzira, kutsvaga, kutarisa nekushandira pamwe nevanhau vavo munzira dzaimbove dzakaoma zvikuru kana dzinodhura-dzisingabvumirwi. Sezvo vhidhiyo yakagadziriswa ichienderera mberi inosvika pasi rose sechinhu chakakosha chekukurukurirana, tsvina yea software zvinogadzirisa zvinopa vadziki vehupenyu nemari inoshandiswa uye ine nyore kushandisa toolset kuti vabatsire kutarisira vhidhiyo yavo yekusika.
Akati Sam Bogoch, anotungamira mukuru weAA, "tsvina yeve iri kukura nokukurumidza kubva pakusikwa kwedu nekuda kwekuenderera mberi kwekugadziriswa kwepasi rose kwema software edu asinganzwisisiki ekutsvaga nekugadzirisa mavhidhiyo." Kuenderera mberi Bogoch, "Takawana SeedInvest kuva rakanaka mari yevashandi pamwe chete uye vanofara kugamuchira vashandi vemari kuti vave chikamu chekambani yedu inokura. "
Previous: Red Digital Cinema Kubata Nhaurirano neCinematographer Sandra Valde-Hansen Pa 2018 Camerimage
Zvadaro: GARRETT BROWN ANOITA KAMERA YAKE YOKUTENDA KUZIVA KUJAPAN
Hey Buddy !, Ndakawana mashoko aya kwauri: "axle ai Inotanga MbeInvest Funding Campaign". Heino nheyo yehutaniti: https://www.broadcastbeat.com/axle-ai-launches-seedinvest-funding-campaign/. Ndatenda.